I-China i-Aurora Cannabis ibeka i-1.7 yezigidi zeenyawo zenyawo ze-behemoth kwindawo yokuthengisa mveliso kunye nabathengisi | UAixiang
I-Aurora Cannabis iceba ukothula enye yezona zindlu zokugcina izindlu zibiza kakhulu kwaye zibiza kakhulu ezisetyenziselwa ukukhulisa i-cannabis kwimbali, kodwa nawuphi na umthengi onokubakho angaxakeka ekufumaneni inkcitho engakumbi ukuze iprojekthi igqitywe ngempumelelo.
Ngokwezixhobo zentengiso ezifumanekayo esidlangalaleni, i-Aurora ityale imali ezizigidi ezingama-260 zeedola zaseCanada (i-205 yezigidi zeedola zaseMelika) "zonke zibandakanyiwe" kwisigidi seenyawo esikwi-1.7 seMedicine Hat, eAlberta, apho inkampani iya kuba yintloko yeColliers International, ebekwe eToronto, kudweliswe njengomcebisi wezezimali kunye ne-arhente yoluhlu lwezindlu ezizalisiweyo.
Nangona kunjalo, ukuba umthengi ugqibezela ukusetyenziswa kwendlu yendlu eluhlaza ("njengeziko lobugcisa lendawo yokunyanga greenhouse"), inokufuna izigidi zeedola kwinkcitho eyongezelelweyo, kwaye ukuba igqityiwe nge-non-cannabis ukusetyenziswa, kunokufuna inkcitho encinci.
Olu luhlu ngumzekelo wakutshanje wokurhoxa okukhulu komvelisi omkhulu waseCanada kwizindlu zokugcina ii-cannabis ezinkulu kunyaka ophelileyo, kwaye umlimi ugqithise kakhulu kumhlaba olimekayo phakathi konyaka ka-2017 nowama-2019.
Ngokwengxelo ye- "Cannabis Business Daily", uninzi lweeprojekthi zegreenhouse, nokuba zakhiwe ngokudityaniswa kunye nokufunyanwa okanye ukugqitywa ngokudityaniswa kunye nokufunyanwa, ekugqibeleni kubangele abavelisi abanelayisensi baseCanada ukuba bahlupheke ngokuthe ngqo izigidi zeedola kwilahleko yokuthengiswa kwezindlu kunye nezigidi zezigidi zeedola. Uluhlu lokubhala phantsi.
Idilesi kwincwadana yase-Alberta Greenhouse iyahambelana nedilesi esetyenziswe sisakhiwo se-Aurora Sun.
I-MJBizDaily ifunde ukuba i-Aurora iphelise ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwe-Aurora Sun greenhouse kunyaka ophelileyo, kwaye izisa ipropathi kwintengiso ngaphandle kwengxaki "yokufumanisa ixabiso" lokubuza amaxabiso. Oku kuya kunceda ukufumanisa amaxabiso asethi kwiimarike ezinokuguquguquka.
Ngokwencwadana enemifanekiso, "ukugqitywa kwethagethi" kudwelisiwe njengekota yesibini ukuya ekuqaleni kwekota yesithathu yalo nyaka.
Le ntshukumo iza kunyaka omnye emva kokuba u-Aurora amkele isibonelelo sayo kwigreenhouse enkulu e-Exeter, e-Ontario, kwaye ibhidi malunga nesiqingatha se-C $ 17 yezigidi zexabiso lokudweliswa kunye nesinye kwisithathu sexabiso lokuqala lokuthenga.
Kwingxelo ye-imeyile eya kwi-MJBizDaily, isithethi siqaphele ukuba i-Aurora "iyaqhubeka nokujonga kwakhona inethiwekhi yokusebenza yenkampani ukuqinisekisa ukuba ilungele ishishini lethu langoku nelifutshane."
Isiteyitimenti siqhubile: "Ukuphendula kutshintsho lwamva nje kwicandelo kunye neemfuno zethu zobuchule, inkampani ibhengeze ukuba iyakumisa ngokungenammiselo ukusebenza eAurora Sun eMedicine Hat, eAlberta."
"Sikhuthaza ngokukuko ukusetyenziswa kwezinye izibonelelo. Akukho zinkcukacha zithe kratya ngeli xesha kuba le nkqubo isekwinqanaba layo lokuqala."
Uyathengiswa sisakhiwo esingundoqo seenyawo ezizizigidi ezili-1.4 kunye nesakhiwo esincedisayo seenyawo ezingama-285,000.
Ngokwencwadana enemifanekiso, umthengisi (u-Aurora kule meko) uvuleleke kuluhlu olubanzi lwezinto ezinokubakho zentengiselwano kunye neendlela zokuqwalaselwa ukwandisa ixabiso.
"Oku kuyakuquka, kodwa kungaphelelanga apho, ukuthengiswa ngokuthe ngqo kwesakhiwo esinye okanye ezibini ezinkozo okanye ezinye iindlela zokuqwalaselwa; ukuthengiswa kwenxalenye yesahlulelo kwiqabane; okanye ukuqeshiswa kwesakhiwo."
Nangona imali eninzi ityalwe, i-Medicine Hat's greenhouse ayikagqitywa.
"Inkcitho eyongezelelekileyo yemali eyimfuneko iyafuneka ukugqiba indawo, kodwa iindleko ziya kumiselwa kukusetyenziswa komthengi," utshilo umphathi weColliers International uMatt Rachiele uxelele iMJBizDaily nge-imeyile.
"Sifumene isikhokelo sokuqala kakhulu kwiinjineli. Ukuza kuthi ga ngoku, indleko zokugqiba onke amaziko okusetyenziselwa ukungasebenzisi intsangu inokuba ngaphantsi kwe-10% yenkcitho, kodwa ukugqitha kwinjongo ebicetyelwe yona kwasekuqaleni, kufuneka ichithe kakhulu yemali. "
URachiele uthe iindawo ezintandathu kwezingama-37 zesakhiwo esikhulu sele zigqityiwe kwaye ezinye ezintandathu zigqityiwe.
Olu xwebhu lwentengiso luthi: "Nangona ekuqaleni yayijolise ekubeni igqitywe njengeziko lokugcina impilo kwigreyidi yezonyango, isakhiwo kunye nezixhobo ezinxulumene noko zinokusetyenziselwa ngokulula uluhlu olubanzi lokusetyenziswa okunokubakho."
UMat Lamers ungumhleli wamanye amazwe we-Cannabis Business Daily, esekwe kufutshane neToronto. Ungaqhagamshelana naye nge- [Email Protection].
Ndiyathemba ukuba umntu othile uza kuphanda ukuba kutheni ubungakanani bemakethi ye-cannabis yaseCanada igqithisiwe. Ngaba ukukhula ngokungekho mthethweni (okungekho mvume) okanye irhafu egqithileyo inokuchaza ezinye zeengxaki?
Ndingathanda ukubona iCanada ithumela ngaphandle i-cannabis e-Illinois. Izidleleli ezibawayo apho zibiza imali eninzi kwaye zifumana inzuzo kubathengi bazo. Abaswele imigaqo yokuziphatha okanye imigaqo yokuziphatha kwezeshishini. Izidalwa ezinje kufuneka ziboshwe.
Ishishini le-Cannabis mihla le-ngowona mthombo uthembekileyo weendaba zemihla ngemihla, ezibhalwe ngokukodwa ziintatheli ezinobungcali kolu shishino. Funda nzulu